कोरोनाको पहिलो खोप लगाएपछिको खुसी [तस्बिरहरू]- फोटोफिचर - कान्तिपुर समाचार
माघ १४, २०७७ तस्बिर : अंगद ढकाल, तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ, तस्बिर : इलिट जोशी, तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना, तस्बिर : कविन अधिकारी
काठमाडौँ — सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अभियान सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार बिहान बालुवाटारबाटै भिडियो कन्फरेन्समार्फत खोप अभियानको उद्घाटन गरेका हुन् ।
सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारी बुधबार बिहान नेपालमै पहिलोपटक काेरोना खोप लगाउँदै । तस्बिर : अंगद ढकाल
बुधबार टेकु अस्पतालसँगै पाटन अस्पताल, बलम्बुस्थित एपीएफ अस्पताल, महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताललगायतका ७७ जिल्लाकै अस्पतालहरूमा खोप लगाउन सुरु गरिएको हो।
प्रकाशित : माघ १४, २०७७ १०:३९
उनीसँगै डा‍. अनुप बाँस्तोला र डा. रुना झाले पनि कोरोना खाेप लगाएका छन् । यससँगै देशैभर कोरोना खोप अभियान सुरु भएको छ ।
प्रकाशित : माघ १४, २०७७ १०:०९